समाचार - किन शेयर इलेक्ट्रिक स्कुटर बर्डको मूल्य २ अर्ब अमेरिकी डलर जति उच्च
किन शेयर इलेक्ट्रिक स्कुटर बर्डको मूल्य २ अर्ब अमेरिकी डलर जति उच्च छ
2017 को जाडोमा, घरेलु बाइक सेयरिङ बजार कडा हावाले पूर्ण रूपमा चिसो भयो। 2018 मा, "साझेदारी अर्थव्यवस्था चिसो भएको छ" को आवाज भारी छ। कुनै समय उकालो लाग्ने यो आर्थिक मोडल अहिले जनताले रुचाएका छैनन् ।
तर विदेशी देशहरूमा, एक कम्पनी जसले साझा अर्थतन्त्रको मोडलाई पनि पछ्याउँछ, निरन्तर रूपमा विकास गर्दैछ, अधिक र अधिक मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ।
बाइक सेयरिङको विपरीत, कम्पनी, बर्डले इलेक्ट्रिक स्कुटर साझा गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले केवल चराको एप डाउनलोड गर्न आवश्यक छ, यसलाई खोल्नुहोस् र नजिकको चरा (इलेक्ट्रिक स्कूटर) फेला पार्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई प्रयोग गर्न कारको शरीरमा QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्। यसलाई प्रयोग गरेपछि, बर्डले प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोनबाट सीधै शुल्क कटौती गर्नेछ
बाइक सेयरिङको तुलनामा, जुन "अन्तिम माइल समाधान" मा केन्द्रित छ, बर्डका संस्थापक विश्वास गर्छन् कि विद्युतीय स्कुटर "अन्तिम माइल" को दुखाइ समाधान गर्ने तरिका हो।
भर्खरै, बर्डले आधिकारिक रूपमा $300 मिलियन वित्तियको पछिल्लो चरणको घोषणा गर्‍यो - कम्पनी स्थापना भएको 18 महिना भन्दा कम।
साझा अर्थतन्त्रको जीन लिएर जन्मेको यो युवा कम्पनीले विद्युतीय स्कुटरको बजारलाई द्रुत र स्थिरताका साथ विकास गरेको छ । यी उपलब्धिहरूले उद्योग र मिडियाको ध्यान मात्र आकर्षित गरेनन्, अनगिन्ती प्रश्नहरू पनि आकर्षित गरे।
आजको यो लेखमा हामी सेयर गर्दैछौँ, भेन्चर क्यापिटलिस्ट र सिरियल उद्यमी मार्क सस्टरले चराको बारेमा जनताका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् र उनी चराप्रति किन आशावादी छन् र किन लगानी गर्छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछन्।
हाल, ० देखि युनिकर्न सम्मको स्टार्ट-अप कम्पनीहरू मध्ये, बर्डको सबैभन्दा छिटो वृद्धि दर र ठूलो मात्रामा मूल्याङ्कन छ।
धेरै मिडियाले चराको उच्च मूल्याङ्कन र वृद्धि दरको बारेमा शंका गरेका छन्। यद्यपि, यदि तपाइँ चराको बढ्दो प्रयोगकर्ताको माग र विस्फोटक वृद्धि डेटा देख्नुहुन्छ भने, तपाइँले पनि चराको हालको मूल्याङ्कन अपेक्षाकृत रूढ़िवादी छ भन्ने महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
जब मानिसहरूले चराको बजार हिस्साको बारेमा सोध्छन्, म तिनीहरूलाई सधैं यसरी जवाफ दिन्छु: मार्केटिङको सन्दर्भमा, चराले एक प्रतिशत पनि खर्च गरेको छैन, र उपभोक्ताहरूले पहिले नै "आफ्ना खुट्टाले भोट" गरिसकेका छन्।
वास्तवमा, मलाई चराको भविष्यको बारेमा शंका थियो।
गत वर्ष, जब मैले पहिलो पटक सान्ता मोनिकामा बर्ड स्कूटरको पायलट सेवा सुरु गरेको देखेँ, मलाई लागेन कि कसैले यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ।
सुरुका केही महिनाहरूमा, मैले सडकमा चरा स्कूटरहरू प्रयोग गर्ने छिटपुट मानिसहरू मात्र देखेको थिएँ, तर त्यस पछि प्रयोगको वृद्धि देखेर म छक्क परें।
छैटौं तलाको अफिसबाट फोन गर्दा हरेक दुई–तीन मिनेटमा पाँचवटा बर्ड स्कुटर आए ।
पक्षी प्रयोगकर्ताहरूको संख्याको स्थिर वृद्धि संग, म "शान्त बस्न" थाले।
म चरा चढेर यसको कार्यालयमा गएँ र यसको संस्थापक, ट्राभिस भान्डर जान्डनलाई हाम्रो लगानी स्वीकार गर्न आग्रह गरें।
बर्डको राजस्व वृद्धि आश्चर्यजनक छ, र यो छोटो आपूर्तिको अवस्थामा रहेको छ। हालको विकास गति अनुसार, चराको वृद्धि दरलाई असर गर्ने एक मात्र कारक "आपूर्ति" हो।
के चरासँग खाडल हुन्छ?
यो धेरै मानिसहरूको शंका हो।
हामी तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौं कि जब कुनै ठूलो कम्पनी वा बजार देखा पर्दछ, त्यहाँ समान प्रश्नहरू हुनेछन्।
उदाहरणका लागि, रिङ (तिनीहरू Amazon द्वारा पाँच वर्षमा $ 1 बिलियन भन्दा बढीको लागि अधिग्रहण गरिएको थियो), Facebook, youtube, airbnb, Uber, twitter, intagram र अन्य शीर्ष टेक्नोलोजी स्टार्ट-अपहरूले यस्तै चिन्ताहरू पैदा गरेका छन्।
केही मानिसहरू भन्छन् कि चरामा कुनै नेटवर्क प्रभाव छैन र भाइरस मार्केटिङ महसुस गर्न सक्दैन। जो कोहीले साझा इलेक्ट्रिक स्कुटर सेवा सुरु गर्न सक्छन्। तर मलाई यो त्यति सरल छ जस्तो लाग्दैन। कारणहरु निम्नानुसार छन्:
बर्ड, बजारमा प्रवेश गर्ने पहिलो र रचनात्मकताले भरिएको, चाँडै नै उत्कृष्ट संस्थापक टोलीलाई नियुक्त गर्यो र छोटो अवधिमा छिट्टै $125 मिलियन उठ्यो।
पर्याप्त गोलाबारुदले कम्पनीलाई सेवाहरू छिटो सुरु गर्न र भविष्यका स्कूटरहरू डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै स्टार्टअपहरू अझै विकास योजनामा ​​छन्, पक्षीले नाफा कमाउन थालेका छन्।
यो फाइदाले चरालाई शीर्ष अमेरिकी उद्यम पुँजीपतिहरूको समूहबाट सफलतापूर्वक $300 मिलियन उठाउन सक्षम बनायो।
पुँजीको शक्तिले कम्पनीको वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ, जसले गर्दा कम्पनीले ठूलो बजार हिस्सा ओगट्न सक्छ। बजार हिस्सा जति बढी हुन्छ, अन्य कम्पनीहरूले त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।
सेयरिङ स्कुटरको बजारमा पहिल्यै दिग्गजहरू रहेका बेला लगानीका लागि एउटै मोडलका कम्पनीलाई लगानीका लागि छनोट नगर्नु लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ, किनभने पछाडि परेका कम्पनीहरूलाई दिग्गजहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ।
अहिले सेयरिङ स्कुटर उद्योगमा बर्डले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ ।
साझा स्कूटरको क्षेत्रमा, पहिलो मूभरको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यसको उच्च लगानी घनत्वमा छ।
यदि बर्डले एक ब्लकमा हजारौं स्कुटरहरू लन्च गर्यो भने, नयाँ कम्पनीहरूलाई पूँजी सहयोग बिना व्यवसाय परिचालन गर्न गाह्रो हुनेछ।
थप रूपमा, ढिलो आउनेहरूको पहिचानको कारण, उनीहरूलाई लगानीकर्ताहरूबाट थप रकम प्राप्त गर्न गाह्रो छ।
एप्पलले सन् २००७ मा आइफोन रिलिज गरेपछिको १० वर्षमा मोबाइल फोनको डिजाइनमा कुनै परिवर्तन आउने छैन भनी सामान्यतया विश्वास गरिन्छ, जसरी भविष्यमा स्कुटरको रूप र अनुभूतिमा कुनै फरक नपर्ने अनुमान धेरैले गर्छन्।
तर वास्तवमा, एप्पलले प्रत्येक नयाँ उत्पादन जारी गर्नु अघि आगामी केही पुस्ताका मोबाइल फोनहरूको डिजाइन अग्रिम योजना बनाएको छ। त्यस्तै पक्षी पनि हो, अग्रगामी।
बर्ड एक अग्रगामी कम्पनी हो जसले साझा स्कुटर मोडेल सुरु गरेको हुनाले, तिनीहरूले आफ्ना साथीहरू भन्दा पहिले भविष्यको लागि योजना बनाउँछन्।
हाल बर्डले भविष्यमा धेरै पुस्ताको स्कुटर बनाउने योजना बनाएको छ । यदि प्रतियोगीहरूले सेवाहरू सुरु गर्न पक्षीहरूको डिजाइनको नक्कलमा भर पर्न चाहन्छन् भने, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई राम्रो अनुभव ल्याउन र बजार नेताको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई स्थिर बनाउनका लागि उत्पादनहरूको नयाँ पुस्ता चाँडै सुरु गर्नको लागि आफ्नो अवस्थित प्रभावशाली स्थिति र पर्याप्त डेटा प्रयोग गर्नेछ।
बर्डले डाटा सङ्कलनमा ठूलो नेतृत्व लिएको छ। साधारण देखिने विद्युतीय स्कुटर वास्तवमा पाङ्ग्राहरू भएको कम्प्युटर हो। बर्डले अनबोर्ड CPU र प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन बीचको सम्बन्धको माध्यमबाट ट्राफिक मार्ग डेटाको ठूलो मात्रा सङ्कलन गर्न सक्छ, जहाँ प्रयोगकर्ताले बिहान कार उठाउन र बेलुका फिर्ता गर्न चाहन्छन्।
यसले चराहरूलाई प्रत्येक शहरको लागि उपयुक्त सूची स्तर योजना बनाउन मात्र अनुमति दिँदैन, तर स्कूटरहरूको उपयुक्त सुरुवात मार्फत फाइदाहरू पनि बढाउँछ।
बर्डले शहरी प्रबन्धकहरूलाई सहरी योजनालाई अझ राम्रोसँग पूरा गर्न मद्दत गर्न डेटा पनि उपलब्ध गराउन सक्छ।
5. चार्ज गर्दै।
धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि चराले रातमा चार्ज गर्नको लागि इलेक्ट्रिक कार फिर्ता लिन टोली गठन गर्नेछ। तर वास्तवमा, हरेक ठाउँका प्रयोगकर्ताहरूले विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न, सोही आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न र बिहान पूर्वनिर्धारित ठाउँमा राख्न सक्छन्।
एक पटक एक शहरमा दुई वा तीन ठूला उद्यमहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, पहिलोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चार्जिङ नेटवर्क लेआउट हुन गाह्रो छ।
6. मर्मत कार्यकर्ताहरू।
बर्डको हरेक बजारमा स्कुटर मर्मत गर्ने टोली छ। यी दक्ष मर्मत कर्मचारीहरूले स्कुटरको पाङ्ग्रा, ब्रेक, केबल, ब्याट्री र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू मर्मत गरेर प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्छन्।
लस एन्जलसका राजनीतिज्ञहरू मर्मत उद्योगमा बर्डले सिर्जना गरेको ठूलो संख्यामा रोजगारीबाट धेरै खुसी छन्। उनीहरूले आशा गरेका छन् कि थप प्रविधि कम्पनीहरू स्थानीय क्षेत्रमा रहन सक्छन्। आखिर, प्रत्येक बजारमा उत्कृष्ट मर्मत कार्यकर्ताहरूको संख्या सीमित छ, र ठूला कम्पनीहरूले प्रायः उनीहरूको लागि उच्चतम तलब तिर्न सक्छन् र उनीहरूलाई स्थिर आय ल्याउन सक्छन्, जुन सामाजिक स्थिरता र विकासको लागि राम्रो छ।
पक्षीहरूको लागि, यो कम्पनीको एक अन्तर्निहित लाभ भएको छ कि उत्कृष्ट मर्मत ज्याला स्रोत अग्रिम प्राप्त गर्न।
अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको हो विद्युतीय स्कुटरको आपूर्ति, र $300 मिलियन वित्तिय सहयोग गर्नेछ।
स्कुटरलाई बिजुली चाहिने भएकाले हरेक दिन चार्ज गर्नुपर्छ । बर्डले लामो ब्याट्री जीवनका साथ इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू डिजाइन गर्न सक्छ, जबकि अन्य उद्यमहरूले मात्र उत्पादनहरूको अघिल्लो पुस्तालाई अनुकूलन गर्न जारी राख्न सक्छ, त्यसैले प्रत्येक स्कूटरबाट बर्डको दैनिक आम्दानी उच्च हुन सक्छ।
अर्को स्पष्ट फाइदा देखिन्छ अदृश्य "ब्रान्ड" हो। जब तपाइँ इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवाको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाइँ चराको बारेमा सोच्नुहुन्छ। जति धेरै मानिसहरूले तपाइँको ब्रान्डलाई एक आविष्कारकको रूपमा हेर्छन्, तपाइँको कम्पनीलाई मिडिया कभरेज प्राप्त गर्न र अन्ततः यो सेवाको पर्यायवाची बन्न सजिलो हुनेछ।
उदाहरण को लागी, जब यो खोज इन्जिन को लागी आउँछ, तपाईले पहिले Bing को बारे सोच्नु हुन्न; जब यो अनलाइन भिडियो को लागी आउँदछ, तपाईले पहिले Hulu को बारे सोच्नु हुन्न।
ब्रान्ड धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
जब म न्यूयोर्कमा थिएँ, धेरै मानिसहरूले मलाई चरा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोधे। यो धेरै सरल छ।
सबै भन्दा पहिले, तपाईंले बर्ड एप डाउनलोड गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि क्रेडिट कार्ड र ड्राइभर इजाजतपत्र जानकारी बाँध्नुहोस् र $ 1 तिर्नुहोस्। यो अपरेशन पछि, तपाइँ तपाइँको आफ्नै स्कूटर सवारी अनुभव को मजा लिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एप अनुसार, तपाईं नजिकैका सबै पक्षीहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। सवारी सुरु गर्न कारको शरीरमा रहेको QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्। बर्डले तपाइँलाई तपाइँको क्रेडिट कार्डबाट प्रति मिनेट 0.15 सेन्ट चार्ज गर्नेछ।
मलाई थाहा छ यसले सान्टा मोनिकामा राम्रोसँग काम गर्छ, तर के यसले वास्तवमै अन्यत्र काम गर्छ?
यस्ता प्रश्न धेरैलाई हुन्छ । उबर देख्दा हामीले त्यही सोच्यौं। यो भन्न सकिन्छ कि साझा इलेक्ट्रिक स्कुटर धेरै बजारमा प्रवेश गरेको छ, र राम्रो परिणाम हासिल गरेको छ।
जाहिर छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा, अवस्थाको प्रयोग एउटै हुनेछैन।
उदाहरणका लागि, केही ठाउँमा यो सेवा वर्षैभर उपलब्ध हुन्छ भने केही ठाउँमा यो ९ देखि १० महिनासम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सामान्यतया, यो सेवाको दायरा तपाईले सोचे भन्दा धेरै फराकिलो छ।
सबैभन्दा छिटो बढिरहेको युनिकर्न लस एन्जलसको हो, सान फ्रान्सिस्को होइन। के तपाई यसबाट अचम्मित हुनुहुन्छ ?
अचम्मको कुरा होइन। लस एन्जलसको दोस्रो ठूलो बजार, तेस्रो ठूलो टेक्नोलोजी इकोसिस्टम र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा छिटो बढ्दो उद्यमशील समुदाय छ, लस एन्जलस आफैं यातायात समाधानको क्षेत्रमा पनि अग्रगामी सहर हो। विगत १०० वर्षमा, लस एन्जलसले राजमार्ग, एयरोस्पेस, रकेट प्रोपल्सन, गहिरो पानीको बन्दरगाह र स्पेसएक्सको क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसैले यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि लस एन्जलसमा चराको स्थापना भएको हो।
यो स्वाभाविक छ कि चरा लस एन्जलसमा जन्मिएको थियो।
त्यसकारण अपफ्रन्ट, ग्रेक्रफ्ट, बी क्यापिटल ग्लोबल र अन्य उत्कृष्ट लस एन्जलस कोषहरूले पक्षीलाई समर्थन गर्दछ। ट्राभिस जस्ता अनुभवी र सक्षम संस्थापक र Paige Craig जस्ता शीर्ष स्थानीय कार्यकारीको साथ, हामी सबै विश्वास गर्छौं कि यो टोलीले रणनीतिहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
विद्युतीय स्कुटर किन ?
मानिसहरू किन साइकल चलाउँदैनन् वा हिँड्दैनन्?
यो अक्सर उठाइन्छ।
हिड्नु राम्रो छ, अवश्य पनि। मलाई सान्ता मोनिका, सान फ्रान्सिस्को र न्यूयोर्कमा हिड्न मन पर्छ, तर कहिलेकाहीँ मसँग 1.6 माइलको गन्तव्य हुन्छ र मसँग पछाडि र पछाडि जानको लागि त्यति समय हुँदैन।
Uber र LYFT अवरुद्ध हुन सक्छ, र सुरूवात बिन्दुहरू बीच कुनै सीधा बस लाइन छैन। इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू
यो समस्या समाधान गर्न सक्छ।
हरेक दिन, तपाईं अझै पनि स्थानीय सबवे वा लाइट रेल प्रणालीमा हुन सक्नुहुन्छ, तर इलेक्ट्रिक स्कूटरले उत्तम "अन्तिम माइल" समाधान प्रदान गर्न सक्छ। यदि लोकप्रियता विस्तार भयो भने, यसले ट्राफिक जाम पनि कम गर्न सक्छ र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन पनि कम गर्न सक्छ।
निस्सन्देह, मलाई साइकल पनि मन पर्छ। तर सान्ता मोनिकाको मामलामा, इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू साइकल भन्दा छोटो यात्रा (3 माइल भन्दा कम) मा धेरै राम्रो छन्। यदि तपाईं ड्राइभ गर्न वा बस लिन चाहनुहुन्न भने, साइकल प्रयोग गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका5माइल भन्दा बढी हुनुपर्छ। म अक्सर तीन मिनेटमा 50 चराहरू भेट्छु।
बिजुली स्कूटर पूर्ण रूपमा तैनात हुँदा म अन्य धेरै शहरहरूमा समान परिदृश्यहरू आशा गर्दछु।
उपभोक्ताहरु खुट्टाले भोट हाल्दै आएका छन् ।
के स्कुटर सुरक्षित छ?
हेलमेट लगाउनु पर्दैन ?
चरा र साइकल प्रयोगकर्ता दुबैले हेलमेट लगाउनु पर्छ, तर साइकल हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपमा एकीकृत भइसकेको छ, त्यसैले हामी "हेलमेट बिना साइकल चलाउने" को घटनामा आँखा चिम्लेर बस्छौं।
तर स्कुटर सेयर गर्नु नयाँ कुरा हो, त्यसैले हेल्मेट बिना स्कुटर सेयर गर्नेले ध्यान आकर्षित गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
बर्डले प्रयोगकर्तालाई ३० हजार हेल्मेट निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । निस्सन्देह, चराहरूको लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूले हेलमेट लगाउँछन् भनेर निगरानी गर्न असम्भव छ। अहिलेसम्म धेरैले हेलमेट लगाएका छैनन् ।
थप रूपमा, बर्डले प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको लागि यसको शीर्ष गति 15 माइल प्रति घण्टामा सीमित गरेको छ।
यसमा कुनै शंका छैन कि चराले नयाँ यातायात क्षेत्र मात्र सिर्जना गर्दैन, तर प्रयोगकर्ता र लगानीकर्ताहरूको कल्पनालाई पनि उत्तेजित गर्छ। यो ठूलो सफलताले Uber लगायत धेरै कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आकर्षित गर्नेछ, जसले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
म चराको सम्भावनाको बारेमा आशावादी छु, यसको अभिनव खेलको कारणले मात्र होइन, तर चराहरूको टोलीले उनीहरूलाई कहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले पनि।
बर्डले 18 महिनामा0बाट अरबौं डलरको मूल्यमा अभूतपूर्व परिणामहरू हासिल गरेको छ। अधिक विरलै, चराको राजस्व पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई भुक्तान नगरी द्रुत रूपमा बढिरहेको छ।
कथन: यो पोष्ट उत्साही netizens द्वारा साझा र जारी गरिएको हो र यो प्लेटफर्म को स्थिति को प्रतिनिधित्व गर्दैन। यदि तपाइँसँग कुनै आपत्ति वा संदिग्ध उल्लङ्घन छ भने, कृपया हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
पोस्ट समय: नोभेम्बर-08-2021